စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း(၁) | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
June 6, 2007, 2:51 pm Filed under: General AungSan ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာတွေကို ဖတ်ချင်ကြသော သူများအတွက်ရော ၊ လင်းကိုယ်တိုင် လင်းဘလော့ခ်မှာရှိနေစေချင်တာရော အားလုံးပေါင်းပြီး ဒီစာတွေကို လက်ညောင်းခံရိုက်ပေးပြီး ဖော်ပြခြင်းပါ .. ။ အချို့မိတ်ဆွေတွေ တောင်းဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဘ၀ပါရမီဖြည့်ဖက် ဒေါ်ခင်ကြည်အကြောင်းကို ရေးသားဖို့အတွက် လက်လှမ်းမှီသလောက် ဆိုင်တွေ ၊ လူတွေထံမှာ လင်းလက် လိုက်ရှာပေမယ့် ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ အားလုံးအတွက် အရေးကြီးပါတယ် . ။ မိမိဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ အရာအားလုံးကို နားလည်ပေးနိုင်ပြီး ပါရမီဖြည့်နိုင်မယ့်သူဆိုတာ တကယ်တော့ ရှားပါးရတနာတစ်ခုပါ .. ။ အခု ဖော်ပြမယ့် “စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း”အကြောင်းက သိပ်ရှည်လွန်းလို့ နှစ်ပိုင်းခွဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် .. ။ စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
“ဒီဝတ္ထုကို မင်းရေးလိုက်တော့ မင်းမိန်းမက ဘာမှမပြောဘူးလား ။ မကန့်ကွက်ဘူးလား”
“ဘာမှ မပြောပါဘူး ။ ကျွန်တော်ဝတ္ထုရေးရင် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက် ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာ သူသိပြီးသားမို့ ဘာမှမပြောပါဘူး”
“ဒါဆို တော်သေးတာပေါ့ ။ မင်းဝတ္ထုက စိတ်ကူးယဉ်သာဆိုတာ်။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်လိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ မင်းကိုယ်တိုင် အဲဒီနယ်ဘက် ရောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား”
ဤသို့ ကျွန်တော်အား စစ်ဆေးမေးမြန်းသလို ပြောနေသူကား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။
သူ၏ မျက်နှာထားက ခပ်ပြုံးပြုံးဖြစ်နေ၍ ကျွန်တော့်အား ရယ်စရာ သဘောပြောနေကြောင်း သိသာပါသည်။ အချိန်ကာလအားဖြင့် ၁၉၄၅ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ။
နေရာကတော့ ဗဟန်း ၊ တာဝါလိန်း (ယခု နတ်မောက်လမ်း)အမှတ်၂၅ရှိ ဗိုလ်ချုပ်နေထိုင်သောအိမ် (ယခု ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်)။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ၁၉၄၆ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ရက်နေ့တွင် ကျင်းပလတ္တံ့သော ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံကြီးတွင် သဘာပတိအဖြစ် အဖွင့်အမှာစကားပြောရန် သူ၏ မိန့်ခွန်းရှည်ကြီးကို ကြိုတင်ရေးနေချိန် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအရ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံကြီးဖြစ်၍ ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပကပါ စိတ်ဝင်စားနေသည့် အခြေအနေတွင် ဗိုလ်ချုပ်သည်သူ၏ မိန့်ခွန်းကို အထူးဂရုစိုက်၍ ကြိုးစားရေးသားကာ နေ့ရောညပါ ဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်ရေးနေချိန်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တွင် သူ့အား ခေတ္တနားနေစေချင်၍ ဒေါ်ခင်ကြည်အား လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖျော်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်က လက်ဖက်ရည် သွားပေးရင်း မန္တလေးမြို့မှ လူထုဦးလှပို့ပေးလိုက်သော “လူထုဂျာနယ်”တစ်စောင်ကိုပါ ပေးလိုက်ပါသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းရေးတာ ခဏနားပြီး ဒီဂျာနယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦး”
ဤသို့ ကျွန်တော်ကပြောလိုက်မိခြင်းမှာ ထို“လူထုဂျာနယ်”တွင် ကျွန်တော်ရေးသော ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ပါလာသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ဖတ်စေချင်၍တစ်ကြောင်း ၊ သူ၏ သဘာပတိမိန့်ခွန်းကြီးရေးနေရ၍ စိတ်မော လူမောဖြစ်နေခြင်းမှ ခေတ္တအနားရစေ၍တစ်ကြောင်း ဖတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“လူထုဂျာနယ်”တွင်ပါသော ကျွန်တော်၏၀တ္ထုတိဇတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်မှာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးပြီးခါစအချိန်က မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်မှ “သုံးလိုင်းနှစ်ပွင့်”လက်ဖတင်နှင့် (ဗိုလ်)အဆင့်ရှိသူတစ်သီးသည် သူ၏ဇာတိမြေ ဗန်းမော်မြို့သို့ ပြန်ရာတွင် လာရှိုးမြို့မှတစ်ဆင့် သိန္နီ ၊ ကွတ်ခိုင် ၊ မူဆယ် ၊ နမ့်ခမ်းလမ်းအတိုင်းသွားစဉ် မူဆယ်ဈေးတွင် အနီးအနားရွာတစ်ရွာမှ ကချင်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသိကျွမ်းခင်မင်သွားသည်။ ကချင်မလေးက သူတို့ရွာသို့ လိုက်လည်ပတ်ရန်ခေါ်သဖြင့် လိုက်သွားရာမှ စစ်ဗိုလ်ကလေးနှင့် ကချင်မလေး ချစ်ကြိုးသွယ်မိကြပြီး ထိုရွာကလေးမှာပင် လက်ထပ်လိုက်ကြသည်။ ထိုအချိန်က မြန်မာ-တရုပ် နယ်စပ်တါင် တရုတ်ဖြူတပ်ကြွင်းတွေ သောင်းကျန်းနေရာ တစ်နေ့တွင် မူဆယ်အနီးရှိ ရွာကလေးသို့ ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်စဉ် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ကလေး၏ ညားခါစဇနီးကချင်မလေး ကျည်သင့်သေဆုံးသွားသဖြင့် မြန်မာဗိုလ်ကလေးအဖို့ ကြေကွဲယူကျုံးမရဖြစ်လျက် ကျန်ရစ်ပုံလွမ်းခန်းနှင့် ဇတ်သိမ်းထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်က ၀တ္ထုကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်အား “မင်းမိန်းမက ဘာမှမပြောဘူးလား”ဟု ကျီစယ်သလို မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ခဏမျှကြာသော် ဗိုလ်ချုပ်သည် “လူထုဂျာနယ်”ကို ဘေးသို့ ချထားလိုက်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုစဉ်းစားနေဟန်ဖြင့် ခေတ္တငြိမ်နေပြီးနောက်
“ငါလည်း မင်းတို့လိုစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်ကွာ”ဟု ပြောလိုက်ပါသည်။
(ကျွန်တော်သည် စာရေးဝါသနာပါ၍ ၁၉၃၆ခုနှစ်ကပင် ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ပါလာအောင် ရေးထားနိုင်ရာမှ ကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း ၊ တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်း ၊ သမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေသော “အိုးဝေ” မဂ္ဂဇင်းများတွင် ၀တ္ထုတိုဆောင်းပါးများ ပါနေပြီဖြစ်သဖြင့် တော်လှန်ရေးပြီးခါစတွင်လည်း ဆရာဦးဘချို၏ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်နှင့် ဦးချစ်မောင်၏ “ဂျာနယ်ကျော်”တို့တွင် ဆောင်းပါးများရေးနေပြီဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်က ကျွန်တော့်အား စာရေးဆရာဖြစ်နေပြီဟု လက်ခံထားဟန်တူပါသည်။)
“ဒါပေမယ့် ငါကတော့ မင်းတို့လို အချစ်ဝတ္ထုတွေရေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရေးလည်းမရေးတတ်ဘူး။ ငါကတော့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်း ၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းနဲ့ လူတွေကို ပညာပေးစာအုပ်မျိုးတွေပဲ ရေးမှာကွ ၊ ဒါဟာလည်း လက်ရှိအခြေအနေအရ လောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကွာ”ဟု ညည်းညူသလို ပြောလိုက်ပြီးနောက် ချက်ချင်းပင် သူ၏ “ပတ်ကား”ဖောင်တိန်ဟောင်းကို ပြန်ကောက်ယူကာ ညီလာခံမိန့်ခွန်းကြီးကို ဆက်ရေးနေပါတော့သည်။
အလျဉ်းသင့်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းရေးပုံအကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ဘ၀ကပင် သူ၏မိန့်ခွန်းမျးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးပြီး အင်္ဂလိပ်လိုပင် ပြောလေ့ရှိပါသည်။
သူသည် အင်္ဂလိပ်စာကို ဦးစားပေးသင်ကြားလေ့မရှိသော ရေနံချောင်းမြို့ နေရှင်နယ် (အမျိုးသားကျောင်း)မှ ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလျက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ရောက်ပြီးနောက် နေရှင်နယ်ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ယောက်ဟု ယုံနိုင်စရာမရှိအောင် အင်္ဂလိပ်စာကို အထူးကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်လာပါသည်။ သူသည် အင်္ဂလိပ်စာကို အခြားကျောင်းသူကျောင်းသားမျးထက် ပိုတော်အောင် အထူးကြိုးစားလေ့လာခဲ့၍ ကျွမ်းကျင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်း သရက်ခရိုင် ကျေးလက်ဒေသတွင် တပ်မတော်ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ယာယီစခန်းချထားစဉ်က
“ငါတို့က နယ်ချဲ့သမားဆီက လွတ်လပ်ရေးမရရအောင် ယူရမှာမို့ နယ်ချဲ့သမားရဲ့ဘာသာကို ကျွမ်းကျင်အောင် လေ့လာထားရမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာတော်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဒါမှလည်း ငါတို့ဟာ နယ်ချဲ့သမားကို အရေးဆိုနိုင်မယ်။ ငြင်းခုံနိုင်မယ် ။ လွတ်လပ်ရေး မပေးပေးအောင် တောင်းနိုင်မယ် ။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ကွာ ။ လိုအပ်လာရင် နယ်ချဲ့သမားကို သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ရေရေလည်လည်ဆဲနိုင်မယ်ကွ” ဟု ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်များအား ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။
ထို့ကြောင့် သူကိုယ်တိုင်က အင်္ဂလိပ်စာအထူးကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းအောင် ကြိုးစားလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံခြားသားသတင်းစာဆရာများ ၊ သံရုံးအရာရှိများအား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မိန့်ခွန်းများကို ပြသခဲ့ဖူးရာ အားလုံးကအလွန်အံ့သြကြပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ဝေါဟာရ ကြွယ်ပုံ ၊ ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံ ၊ အီဒီယမ်ခေါ် နှိုင်းယှဉ်တင်စား၍ ရေးသားပုံတို့က ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့ခြင်းဟု ဟုတ်ပါလေစဟု သံသယဖြစ်လောက်အောင် အလွန်ကောင်းနေကြောင်း ပြောကြပါသည်။
အထူးသဖြင့် (၂၀-၁-၄၆)နေ့က ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံကြီးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သဘာပတိအဖြစ် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သော သူ၏မူ၇င်းမိန့်ခွန်းမှ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားသည် နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရပြည့်စုံပြီး ရေးသားပုံအလွန်ကောင်းမွန်လှပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်သည်သူ၏ မိန့်ခွန်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးလေ့ရှိရာ ရွှေတိဂုံညီလာခံ သဘာပတိ အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာလည်း အင်္ဂလိပ်ရေးထားသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်က ယင်းမူရင်း အင်္ဂလိပ်မ်ိန့ခွန်းကိုပင်ကိုင်ကာ မြန်မာလိုလက်တန်းပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်က ကျွန်တော်သည် အိုးဝေသတင်းစာ အယ်ဒီတာလုပ်နေစဉ် အမေရိကန်မှ နာမည်ကျော် ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ် ( Johns Hopkins University ) မှ ဘွဲ့ရ လူငယ်တစ်ဦးသည် ဘွဲ့လွန်ပါရဂူဘွဲ့အတွက် သုတေသနစာတမ်းရေးသားပြုစုရန် အကြောင်းရပ်အဖြစ် “မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း”ကို ရွေးချယ်ထားသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လေ့လာသုတေသနပြုရင်း အိုးဝေသတင်းစာတိုက်သို့ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ပြောရင်း ၂၀-၀၁-၄၆ နေ့ရွှေတိဂုံ အလယ်ပစ္စယံ ညီလာခံ၌ ဗိုလ်ချုပ်ပြောကြားခဲ့သော သဘာပတိမိန့်ခွန်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မူရင်းကို ပြလိုက်ရာ ထိုအမေရိကန်ကျောင်းသားသည် အလွန်အံ့သြသွားပုံရပါသည်။
“ဒီမိန့်ခွန်းဟာ အလွန်အရေးပါတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဂျင်နရယ်အောင်ဆန်းရဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားပုံကလည်း အလွန်ကောင်းနေပါတယ်။ သူဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ရိုးရိုးဘီအေဘွဲ့ရခဲ့သူလို့ သိရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်တာ မဟုတ်တော့ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စာမျိုးရေးတတ်ဖို့က မလွယ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ယောက် လာရေးပေးတာများလား”
“မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှ ရေးပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးတာပါ။ သူဟာ အင်္ဂလိပ်စာကို ၀ါသနာပါလို့ အထူးကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဟောဒီမှာ သူနဲ့တခြားမိန့်ခွန်းတွေ ကြည့်ပါဦး”
ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော်သည် ၁၉၄၆ခုနှစ်က ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ဦးစီးကောင်စီ အစည်းအဝေးများ၌ ပြောကြားခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သဘာပတိမိန့်ခွန်း ( အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူရင်း)များကိုပါ ထုတ်ပြလိုက်ပါသည်။
အမေရိကန်ကျောင်းသားများလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် အလွန်အံ့သြနေပါတော့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားကို အံ့သြချီးကျူးခဲ့သူ နောက်တစ်ဦးကား လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ် (အင်္ဂလိပ်) သတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ် ဦးခင်မောင်လတ် (ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်၏ခင်ပွန်း)ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၆၅ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၂၇ရက်နေ့ ကျရောက်သော တပ်မတော်နေ့ (တော်လှန်ရေးနေ့)လုပ်သားနေ့စဉ် (အင်္ဂလိပ်) သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် ဦးခင်မေင်လတ်က ကျွန်တော့်ထံတော်လှန်ရေးနေ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် တောင်းရာ ကျွန်တော်ကညလ်း ၁၉၄၅ခု ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ သရက်ခရိုင်ကျေးလက်ဒေသတွင် ရှိစဉ်က အတွေ့အကြုံများအကြောင်းရေးရင်း ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာကြောင့်ဂျပန်ကို တော်လှန်ရကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်က ရှင်းလင်းထားသည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စာတမ်း (၁၉၄၅ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လက ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာများ ၊ မဟာမိတ်စစ်သည်များရှေ့တွင် ဖတ်ခဲ့သောစာတမ်း)မှ ဗိုလ်ချုပ်၏ အာဘော်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ထုတ်နုတ်၍ ကျွန်တော်၏ဆောင်းပါးတွင် ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
အယ်ဒီတာချုပ် ဦးခင်မောင်လတ်သည် ဗိုလ်ချုပ်၏ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားကို တအံ့တသြနှင့် ချီးကျူးရင်း ကျွန်တော့်ထံသို့လည်း တယ်လီဖုန်းဆက်၍
“ကိုနေ၀င်း အဲဒီအင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့စာတမ်းကို ဗီုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးရေးခဲ့တာလားဗျ”
“ဟုတ်ပါတယ် ဦးခင်မောင်လတ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးရေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်ရေးမူမှာ ခြစ်ရာ ဖျက်ရာတွေ ပါနေတာမို့ ကျွန်တော့်ကို လက်နှိပ်စက်နဲ့ ရိုက်ခိုင်းတာနဲ့ ကျွန်တော်က လက်နှိပ်စက် ရိုက်ပေးရတာပဲရှိတယ်။ စာတမ်းတစ်ခုလုံးကို ရေးခဲ့တာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပဲခင်ဗျ”
ကျွန်တော်က အမှန်အတိုင်းပြောပြလိုက်ရာ ဦးခင်မောင်လတ်လည်း
“အင်း အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားပုံက အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အလွန်ကောင်းနေလို့ ကိုနေ၀င်းကို လှမ်းမေးမိတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ခင်ဗျားတို့လို အင်္ဂလိပ်စာ ဦးစားပေးသင့်တဲ့ ခရစ်ယာန် သာသနာပြုကျောင်း မနေခဲ့ရဘဲ ရေနံချောင်းနေရှင်နယ် ကျောင်းထွက်လို့ သိရတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားကျွမ်းကျင်ပုံ ၊ အဆင့်အတန်းမြင့်ပုံတို့ဟာ အလွန်အံ့သြစရာကောင်းတယ်”ဟု ပြန်ပြောခဲ့ပါသည်။
thanks for your hard work in typing this out.🙂 It would be really nice if we can track down some of Bogyoke Aung San’s speeches. I would love to see them.🙂 I will try to track down next time I go to Myanmar (Burma)
Comment by Lwin Moe
June 7, 2007 @ 7:11 am Reply	Thanks! I love Bo Gyoke very much but know very little about him except the things we were learned in high school, which is not much.
Comment by zaw
February 14, 2008 @ 10:15 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI